Lezi zingqimba Irbis - inketho okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi ezingabizi
Uma kuziwa brand lanamuhla ethandwa amadivayisi digital, ezifana amaphilisi, njengabameleli, aniyikwenza okomkhiwane kuphela. Kodwa izinkampani edume kunazo abonise imikhiqizo yabo ngamanani aphezulu ngezinye izikhathi engafinyeleleki. Yiqiniso, ukukhokhela okunethezeka ezifana hhayi bonke. Ngakho-ke, abantu bakhethe ongakhetha eshibhile. Umahluko phakathi imikhiqizo kule ingxenye abelwe hhayi kakhulu, ngoba ukhetho best enzima nakakhulu. Kodwa ngisho phakathi imikhiqizo kule mikhakha ezinkulu ungabahlukanisa amaphilisi Irbis. Yiziphi idivayisi idatha yomsebenzi osizayo? Yiziphi izici zabo main? Kungani amakhasimende akhethe le nkampani?
Ukugcwalisa - eyodwa yawo wonke
Inkampani wakwazi ukuthandwa abantu phakathi abathengi ngenxa izinto ezimbili: intengo imali kanye anhlobonhlobo imikhiqizo. Impela, mikhiqizo has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo, kodwa ngokuvamile amapuleti Irbis okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi kulula ukuyisebenzisa, ube imishini okuhle lobuchwepheshe kanye nezidingo eziyisisekelo umsebenzisi. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Le nkampani abangekho buhle phezu izingxenye yangaphakathi imikhiqizo. Kunzima ukuhlukanisa imodeli omunye komunye nomunye hhayi kuphela esibukekayo, + futhi zonke ngoba amaphilisi Irbis ezifanayo "ukugxusha." Bonke abasebenza ohlelweni lwakwa-Android, kodwa izinguqulo zabo zingahluka kusuka 4.0 kuya 4.4. Kulokhu, lo mehluko futhi imperceptible. OS isekela zonke isofthiwe zanamuhla futhi ngiwavule masinyane. Yini enye esihlanganisa zonke amapuleti Irbis, ngakho le platform MediaTek MTK 8312. It has processor ezimbili-core ukuthi usebenza amaza ephakeme. Lokhu kwanele ukugcwalisa zonke imiyalelo umsebenzisi futhi abe ezingeni eliphezulu ukusebenza.
Ezinye izici ezithakazelisayo
Kodwa yini enye kungabonwa uma sicabanga ithebhulethi Irbis? Ukubukeza onobuhle eziningana, kuhlanganise Irbis TX69, kwenza kube sobala ukuthi lezi zimo likufanele okufanele zithengwe. Le nkampani inikeza ezihlukahlukene amaphilisi nge diagonals ezahlukene. Kukhona-5 intshi-matrix, futhi kukhona ngaphezulu. I emikhulu usayizi, ayanda kuyoba intengo. Ngokuvamile, isinqumo 1024 x 600 kungaba okwanele ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ngokuphepha, phezu Internet noma ukufunda nje. Kulokhu, sibheke isihenqo tablet kungaba ngasiphi angle. Ngo inani HD-vidiyo futhi Oyster imodeli, okuvumela ukuhlanekezela nemibi iwashi "isithombe".
Ngu design, akukho ezivelele futhi emangalisayo. Akukho "omisiwe", okwakuyoholela ukubamba iso ngesikhathi luhlolo. izindlu Omnyama - isici esiyinhloko okuyinto unazo ithebhulethi Irbis. Izici eziphathelene isinqumo ngesitayela, hhayi evelele kunazo zonke. I-Miniature ohlangothini okhiye, khona emakamelweni phezulu, kanye esingesihle indawo Dynamics. Uma ufuna ukubeka i-tablet ke umsindo 'kuyokuhambela "phesheya. Kulokhu kancane okwe emnandi ngayo uma icindezelwa. Azikho engeli kwesokudla, ubonakala ukuthi akazange 'ngembazo. " Akukho "sinqunyiwe" imiphetho - zonke zazihlanzekile kakhulu. Abasebenzisi ngeke bayaliqonda iqiniso lokuthi kukhona amaphilisi amaningi lesi sendlalelo ngokuqinile kabili-SIM khadi. Kuyinto elula kakhulu, ikakhulukazi kusukela kudivayisi ikuvumela ukuba ushayele kumadivayisi amaningi. Yiqiniso, izikrini-7 intshi uyobheka nzima, kodwa ku-tablet, ungathatha konke futhi asebenzise njengoba ithuluzi Ukufundwa nokuzijabulisa, futhi njengoba idivayisi okuxhumana.
Yiqiniso, amakhophi ezishibhile ngalolo futhi babe amanani ukuthi ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama nokungapheleli. Izinkampani eziningi, efuna ukunqoba uthando amakhasimende, bakhangwa "wrapper" yabo enhle, okungadingi ncamashi amaphilisi Irbis. Izibuyekezo izinkulungwane izethameli bavame ukukhuluma ukubukeka elula. Zonke kakhulu "elibuhlungu." Yiqiniso, amakhono yesimanje vumela "ukuhlobisa" kudivayisi yakho ngekhava ekhethekile, kodwa ngesikhathi esilandelayo uma umsebenzisi uzobhekana enye inkinga. Thola ama-accessory amadivayisi ezinjalo kuba nzima kakhulu.
Ezinye izici ezibalulekile lapho uthenga
Kodwa kukhona izinto ezinhle ukuthi kungabi khona noluncú konke Irbis amaphilisi. Impendulo evela kumakhasimende abaye bazama zonke kudivayisi brand bathi okusebenza esihle. Yebo ithebhulethi ingasheshi, ikakhulukazi emva ukuqalisa phansi, kodwa ngokuvamile, ke wenza yonke imisebenzi angabacwasi ngokushesha. Isikrini touch has a sensitivity high, ngakho-ke, ukuze afeze isenzo esithile sasivumela touch ukukhanya. Phawula abathengi nezindlela ezihlukahlukene zokusisebenzisa yesistimu yokusebenza: ungalanda zokusebenza eziningi futhi bonke azosebenza.
Yiqiniso, umuntu angekhe atjho mayelana juqu isici - Inqubomgomo intengo. Njengoba kushiwo ngaphambili, lezi amadivaysi zitholakala phakathi nawo-range. Ababona ezishibhile hhayi ebizayo, kuba tablet izinga nge idayagonali esiphezulu angathengwa 6 noma 7 ayizinkulungwane.
Sekukonke, inkampani umise ngokwaso ngesandla esihle. Njalo ejabulisa emisha, usebenza ogunyaziwe sesevisi - esimweni a olungaphelele noma ngobugebengu Irbis ochwepheshe liyakwazi ukulungisa idivayisi noma ukubuyisela imali kumthengi.
Kuhle Amagajethi izingane
Izesekeli yangempela ye-iPad Mini
Iphone iminyaka engu-10, kungani abakwazanga ukuletha abantu ndawonye
I-Tablet sibonisa mini-computer ephaketheni lakho
9 amagajethi udinga ukuthola abazali entsha
Ngoba "Tricolor TV" GS700 (tablet): ukubuyekezwa, imiyalelo, izithombe
Ihhotela "Riviera" (Sochi): ikheli, incazelo, ukubuyekezwa. Holiday ngo Sochi
Isitayela Koko Shanel: imithetho eyisisekelo isitayela
-X-ray apharathasi: izinhlobo kudivayisi. Ukwahlukanisa imishini-X-ray
Tattoo abanesifo sikashukela - indlela entsha ukuqapha ezingeni likashukela egazini
Indlela ukupheka chakhokhbili izinkukhu: zokupheka
Inxanxathela "armata". Okwamuva Russian ithangi "armata"
Kanjani ukuze basuse ukungcola okubangelwa obomvu induna: izindlela ezisheshayo
Indlela ukupheka izoso
Njengoba ezothatha isikhundla ekhishini olungaphambili lwesonto. Indlela ukuvuselela ekhishini
Goncharov, "Oblomov": isifinyezo kule noveli
Kuyini drift? izinhlobo drift